Inkampani yaseMayflay ngumenzi ophezulu ophezulu wazo zonke iintlobo zezixhobo zokuphatha i-Coil kunye nezixhobo zokutyisa eChina. Abavelisi booDoiler abahlukeneyo, abaLungelelanisi kunye neeServo feeders, kwaye banokubonelela uluhlu oluhle kakhulu lwe-combo 2 kwi-1 decoilers kunye nabaLungisiyo, kunye nemigca yeCompact Press feed eyaziwayo eya kunciphisa indawo yomgangatho kwaye iphucule ngokumangalisayo ixesha lokudibanisa kwiikhoyili ezinzima.
Inkampani kaMayflay ifunda itekhnoloji yaseJapan kwaye isebenzisa imigangatho ephezulu yemigaqo kulonyulo lwenxalenye, inkqubo yendibano kunye nezinto ezisetyenzisiweyo, egxile ekuyileni nasekuboneleleni ngezisombululo ezinobuchule, ezingenaxabiso lokuCwangcisa ukuCwangcisa kunye nezixazululo zoMnxeba eziZenzekelayo. UMayflay uphuhlisa itekhnoloji yokusika kunye nenkonzo yokujonga. UMayflay ubonelela ngesisombululo esinye sokumisa ukusombulula ingxaki yokondla i-coil strips kwi-media kakuhle, kwaye wandise imveliso kakhulu. Namhlanje, uMayflay lishishini elizinikeleyo elinezinto ezivelisa imveliso ezinesidima esifanelekileyo, ubuchule bobuchule, ulawulo lwanamhlanje, uthungelwano olubanzi lokuthengisa, kunye nentengiso enobuchule.
Uhlobo lo shishino : Manufacturer , Service
Range Product : Punching Machine , Stamping Die , Feeder
Imveliso / iNkonzo : Cinezela ukondla kunye nezixhobo zokuphatha iikhoyili , Umgca woFinekiso lweeCompact Press , Umxhasi we-Decoiler straightener , Cinezela Okondlayo , Umatshini wokushicilela isantya esiphezulu , Umdibanisi we-Decoiler ohlanganisiweyo
Abasebenzi abapheleleyo : 101~200
Inkunzi (iMillion US $) : 10000000RMB
Unyaka owasungulwa : 2010
Sekiso : ISO9001 , CE
Idilesi yeNkampani : Gaolian Section, Xinfeng Village, Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou City, GuangDong, China, Huizhou, Guangdong, China
Umlinganiselo wexesha leNkokheli : Peak season lead time:1-3 months
I-Annual Sales Volume (i-Million US $) : US$2.5 Million - US$5 Million
Umqulu wonyaka wokuthenga (i-Million US $) : US$2.5 Million - US$5 Million
Ukuthumela ngaphandle Ipesenteji : 31% - 40%
Imveliso yeeLines :20
Uhlobo lweZiko (iSq.meters) :30,000-50,000 square meters
Indawo yendawo :Gaolian Section, Xinfeng Village, Xinxu Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong, CN.